DAAWO: Wasiir Qarjab “Maxaabiista Xabsiga Puntland ku jirta waa in la dilo” - Hablaha Media Network
DAAWO: Wasiir Qarjab “Maxaabiista Xabsiga Puntland ku jirta waa in la dilo”
HMN:- Wasiirka Amniga Puntland Cabdi Xersi Cali Qarjab oo muddo sanad ku dhowaad ah arrimo caafimaad uga maqnaa xilka ayaa ku baaqay in la toogto maxaabiista ku jirta xabsiga Puntland.
Wuxuu sheegay inay wax laga xumaado tahay inay Puntland weli xabsiyada isaga haysato oo ay quudineyso Maxabiista, kuwaas oo horey loogu xukumay xukun dil toogasho ah, balse aan lagu fulin.
“Qofkii la qabtay waa in Maxkamad la geeyo oo la Dilo, Kuwii aynu soo Qabanay waxba kama aynu Dilin, Iyagu waa ina dilayaan, Dawladu go’aan ayay ka gaadhay in la laayo” Ayuu yidhi.
Wuxuu sheegay inuusan garaneyn sababta aan loo toogan maxaabiistaasi maadaama ay xukuman yihiin oo ay raashinka uga dhameynayaan maamulkooda. “ “Kuwa Noo Xidhan ee Raashinka Naga Dhameeyay waa in Tiirka la Geeyo, maxaanu Bariiska u siinaynaa”.